१२ दिनमै निको भएर घर फर्किए रुपन्देहीका पहिलो कोरोना संक्रमित
अस्पताल भर्ना भएको १२ दिनमै सञ्चो भएर घर फर्किएका छन् रुपन्देहीका पहिलो कोरोना संक्रमित युवा । उनी छिट्टै घर फर्किएपछि १२ दिनदेखि सुनसान भएको मर्चवारको पुर्निहवा गाउँका मानिसहरु यतिबेला खुसी भएका छन् ।
रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर १ पुर्निहवाका २५ वर्षिय युवामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि वैशाख १९ गते बुटवलको धागो कारखानामा बनाइएको आइसोलेसन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
१२ दिनसम्म आइसोलेसन अस्पतालमा बिताएका उनमा कोरानाको कुनै लक्षण देखिएको थिएन । उनको गत शुक्रबार र सोमबार दुई पटक गरिएको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई मंगलबार साँझ डिस्चार्ज गरिएको हो ।
निको भएर डिस्चार्ज भएपछि युवाले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद दिँदै खुशी व्यक्त गरेको अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले बताए । ‘उनले निकै खुशी भएर डाक्टरहरुलाई धन्यवाद दिए र आफूलाई कोरोना लागे जस्तो महसुस नै नभएको हामीसँग बताए,’ डा. थापाले भने, ‘रिपोर्ट पोजेटिभ आए पनि उनमा कुनै पीर–चिन्ता र डर हामीले पनि देखेनौं, उनको आत्मविश्वास देखेर हामी पनि छक्क पर्थ्यौँ।’
गत वैशाख ५ गते भारतको मुम्बईबाट मर्चवारको ठोठरी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका थिए । उनलाई सीमा क्षेत्रसम्म लिन गएका उनका दाजु र साथी आएका थिए। उनीसँग सम्पर्कमा आएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । उनको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिए पनि कोरोनाको कुनै लक्षण देखिएको थिएन ।
उनी आइसोलेसन अस्पतालमा रहँदा स्वस्थ व्यक्ति सरह गीतमा नाचेर दिने बिताउने गरेका थिए । उनी नाचेको भिडियो भाइरल बनेको थियो । उनीसहित रुपन्देहीमा मंगलबारसम्म १६ जनामा कोरोना संक्रमित देखिएको छ । उनी निको भएपछि धागो कारखानाको आइसोलेसन बेडमा रुपन्देहीका १५ जनासहित २७ जना संक्रमित उपचाररत छन् ।
बुटवलमा कोरोना अस्पताल बिस्तार गर्ने
यसैबीच प्रदेश सरकारले बुटवल धागो कारखानमा रहेको कोरोना अस्पताललाई थप बिस्तार गर्ने भएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको मातहतमा रहेको उक्त अस्पताललाई बिस्तार गरेर २ सय शैय्या थप्ने निर्णय गरिएको अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले जानकारी दिए ।
उक्त अस्पतालमा हाल ३६ सामान्य शैय्या र ८ शैय्याको आइसियु मात्र रहेको छ । रुपन्देही र कपिलबस्तुमा कोरोना संक्रमितहरु बढदै जादा कोरोना संक्रमित बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालका संयोजक तथा प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २ सय शैय्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्ला तीन दिनमा रुपन्देही र कपिलबस्तुमा संक्रमित पुष्टि हुने क्रम बढेपछि उनीहरुको उपचारका लागि अस्पताललाई बिस्तार गर्न थालिएको हो ।
लुम्बिनीका ९ जना संक्रमितको भैरहवामा उपचार शुरु
मंगलबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका ९ जनामध्ये ४ जनालाई भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा ल्याइएको छ ।
भीम अस्पतालमा निर्माण गरिएको कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेशनमा राखेर उनीहरुको उपचार भइरहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी गोपाल उपाध्यायले बताए । उपाध्यायका अनुसार उपचार गराइरहेको व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ ।
त्यस्तै संक्रमित ५ जनालाई बुटवलको धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्थायी अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ । संक्रमितहरु १७ वर्षदेखि ५० वर्ष उमेरका पुरुषहरु हुन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमित पुष्टी हुनेमा लुम्बिनी सांस्कृतिक वडा नम्बर ११ का ३ जना, वडा नम्बर १२ का २ जना, वडा नम्बर ७ का २ जना, वडा नम्बर ५ का १ जना र वडा नम्बर ४ का १ जना हुन् । उनीहरु लकडाउनकै बीचमा भारतको मुम्बई र कानपुरबाट नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र दशगजासम्म आइपुगेका थिए ।
दशगजा क्षेत्रबाट उनीहरु सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर आठ दिनअघि लुकिछिपी नेपालतर्फ प्रवेश गरेका थिए । नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरुलाई लुम्बिनीस्थित श्रीलंकन गेष्ट हाउसमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले बताए ।
उनीहरुमध्ये वडा नम्बर ४ का एकजना क्वारेन्टाइनमा नगई घर गएर बसेका थिए । भोलिपल्ट मात्रै उनलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको थियो